Mhla waphulukana nengqondo yakho: imalunga nantoni, ibhalwe ngubani kwaye kutheni uyifunda | Uncwadi lwangoku
Encarni Arcoya | 07/06/2021 08:16 | Iincwadi
Ngaphakathi ekusungulweni kwencwadi, kukho ezinye, ngenxa yomxholo, umzuzu okanye imbali, uloyiso kwaye uye kude kakhulu. Yiloo nto eyenzekayo ngoMhla wokulahleka kobuNgcolileyo, iyelenqe lokuba, nangona ekuqaleni ungazi ukuba ungayithatha phi, kamva iyakutsala ngohlobo lokuba yonke into oyifunayo kukufikelela esiphelweni ukuze wazi ukuba yintoni idlulile.
Ukuba ufuna ukwazi izinto malunga nomhla wokulahleka kwengqondo, ukuba ngubani oyibhalileyo, imalunga nantoni, ingabalinganiswa bayo okanye ukuba incwadi ibalulekile, siyakumema ukuba ufunde oko sikulungiselele kona.
1 Ngubani umbhali womhla wokulahleka kwengqondo
2 Luthini usuku awalahlekwa yingqondo ngalo?
2.1 Abalinganiswa boMhla wobuNgcono babelahlekile
3 Ngaba kufanelekile ukuba ufunde le ncwadi?
4 Lumka: kukho icandelo lesibini
Ngubani umbhali womhla wokulahleka kwengqondo
'Umtyholwa' Womhla wokuphulukana nengqondo kwakhe akakho omnye umntu UJavier Castillo. Lo mbhali waseSpain ovela eMijas wapapasha inoveli yakhe yokuqala ngo-2014. Ngapha koko, wazipapasha. Nangona kunjalo, abapapashi bayiqaphele xa yayiqala ukuphumelela, kangangokuba uninzi lwathi luza kuyipapasha. Okokugqibela, wakhetha uSuma de Letras kwaye yapapashwa kwakhona ngo-2016.
Ngokungafaniyo nabanye ababhali, ababenomdla wokubhala kwaye bakufundele, uJavier Castillo wayengumcebisi wezezimali. Kwakungexesha lakhe lokuzimela xa wakhupha ubuchule bakhe kwaye wazisa inoveli yokuqala phambili. Ukusukela ngoko ayikayeki kuba ineenoveli ezi-5 kwintengiso, eyokugqibela yazo, Umphefumlo woMdlalo, ukusukela ngo-2021.
Luthini usuku awalahlekwa yingqondo ngalo?
Ngaphandle kokutyhila nantoni na eyimfihlakalo, ibali loMhla wokulahleka kwengqondo Iqala ngokubulala kunye nokubanjwa. Kubonakala uYakobi ehamba ze ethwele intloko yomfazi. Ngokucacileyo, amapolisa ayamgcina kwaye azame ukufumanisa ukuba ngubani lo mfazi, kutheni wambulala, uphi umzimba, njl.
Ukwenza oku, bathumela ingcali ye-FBI uStella ukuba ikhuphe olo lwazi kuye. Kodwa uYakobi uthatha isigqibo sokumxelela ibali elidala, ukunika intsingiselo kwinto eyenzekileyo ... Kwaye ukusuka apho ibali liqala ukuba yintsingiselo, imfihlakalo kunye nokuphambana.
Abalinganiswa boMhla wobuNgcono babelahlekile
Ukwenza icace kuwe ukuba ube nembono yabalinganiswa oza kudibana nabo ngoMhla wokulahleka kobunyulu, apha sidwelise:
UYakobi. Ungumlinganiswa wokuqala odibana naye kwaye awuqinisekanga nokuba uyaphambana na, ukuba uphilile engqondweni okanye kwenzeka ntoni kule ndoda.
UGqirha Jenkins. Lo mlinganiswa ekuqaleni ubona njengesekondari, kodwa enyanisweni ubalulekile ebalini. Ungumlawuli weziko labagula ngengqondo apho amkelwe khona uJacob.
USteven. Umzali. Uya kuyibona amatyeli amabini; okoko umbhali ekubonisa inqanaba lomlinganiswa kwiminyaka edlulileyo kunye nomnye okhoyo. Kunye naye, izalamane ezinxulumene nabanye abalinganiswa: Karen, Amanda kunye Carla.
UStella hyden. Iprofayile ye-FBI bayithumela ukuba ithethe noJacob kwaye bafumanise ukuba yintoni ekhokelele ekwenzeni ulwaphulo-mthetho alwenzileyo.
Asinakho ukutyhila okuninzi malunga nabalinganiswa kuba ukuba senzile, singaphela sikunika imikhondo kunye nokuhambisa iinxalenye ezibalulekileyo zencwadi.
Ngaba kufanelekile ukuba ufunde le ncwadi?
Emva kwale sikuxelele yona, into eqhelekileyo kukuba unoluvo lokuba yincwadi na ongathanda ukuyifunda okanye ukuba, ngenxa yesiqwenga sebali, ibali okanye indlela yokubalisa, ayikutsaleli ngokwaneleyo. Inyani yile yokuba indlela yokubalisa ibali yeyona ikugcwalisayo ngamathandabuzo ekuqaleni.
Xa ufunda isahluko sokuqala, awazi ukuba kwenzeka ntoni.. Awazi ukuba ngubani, ngoba, kwenzeke ntoni. Umbhali ukunika nje imivumbo embalwa Ngomhla wokulahleka kwengqondo. Ukuba songeza kuloo nto ukuba isahluko sesibini sitshintsha useto kunye nabalinganiswa, sikushiya ukhululwe ngakumbi kwaye unokucinga ukuba ayisiyoncwadi kulula ukuyifunda.
Kuwo onke amaphepha, uza kufumana amaxesha amabini okuchazwa kamva kwinoveli. Kwelinye icala "okwangoku" (kuthathelwa ingqalelo unyaka ebhalwe ngawo inoveli okanye oyibekayo) nakwelinye elidlulileyo (kwiminyaka eliqela eyadlulayo ngexesha labo baphambili). Kuqala kuyaphazamisa, ngakumbi kuba ayicacisi nokuba ukwixesha langoku okanye elidlulileyo. Xa sele ubazi abalinganiswa, loo ngcaciso ayimfuneko.
Alithandabuzeki elokuba Ibali ekuqaleni libonakala lingenangqondo, kwaye ngaphezulu kwakanye ungaziva ngathi liyadika, okanye akukho nto iphosakeleyo ngokuqhubeka nalo. Kodwa imfihlelo ejikeleze abalinganiswa yenza ukuba ungamshiyi; Uyathanda ukwazi ukuba kwenzeka ntoni, umbhali uza kuphuma njani kwintloko ebeke abalinganiswa kuyo. Kwaye into endiyithandayo kukuba isiphelo asiyonto oyilindeleyo. Zininzi iinkcukacha eziphelisa ukubaleka, ziyakothusa, kwaye yinto entle leyo. Nokuba ungumfundi onomdla, uyakufumana isimanga sakho kwincwadi.
Ke, kwicala lethu, nakwinxalenye yam kuba ndiyifundile le ncwadi, ewe, siyacebisa. Nokuba awunamakhonkco ekuqaleni, qhubeka unike ithuba kuba kwimfihlakalo ekhoyo, kufanelekile.
Lumka: kukho icandelo lesibini
Ngaphambi kokushiya isifundo, kufuneka sikwazise. Umhla ophulukene nengqondo yakho yincwadi enokufundwa ngokuzimeleyo; inesiqalo kunye nesiphelo. Nangona kunjalo, kumaphepha okugqibela umbhali ngokwakhe wenza "into" eshiya ubusi emilebeni yakho kwaye, ukuba ngeli xesha uzinikele ekuyifundeni sele ulikhoboka, loo mphetho ukhululekileyo awushiyayo uya kukwenza ufune owesibini. incwadi.
Ku malunga Usuku lwalahleka uthando kwaye sele iivenkile zeencwadi, kungoko kungafuneki ukuba ulinde ixesha elide ukuba iphume. Kuyo kubaliswa icandelo lesibini lebali, kugxilwe kubalinganiswa abafanayo, kodwa ukongeza ezinye ezimbalwa ezibonakala njengezisekondari kwelokuqala.
Ayisiyo ukuba yincwadi ekufuneka uyifundile ngendlela enyanzelekileyo, kuba enyanisweni ukuba wanelisekile nguMhla wokulahleka kobulumko, mhlawumbi ayizukubuza; Kodwa ukuba ungomnye wabo bafuna ukufumana isisombululo esipheleleyo semfihlakalo, siyacebisa.
Kwaye wena? Ngaba ukhe wayifunda incwadi okanye iincwadi? Ucinge ntoni / ubucinga ntoni?
Umendo opheleleyo kwinqaku: Uncwadi lwangoku » Iincwadi » Iincwadi » Umhla wokulahleka kwengqondo wawulahlekile